» मासु खाँदा ध्यान दिनैपर्ने यी कुरा
मासु खाँदा ध्यान दिनैपर्ने यी कुरा
यतिबेला हिन्दु धर्मावलम्बी नेपालीहरु दशैं मनाइरहेका छन् । आफू भन्दा ठूलाबडाको हातबाट टिका लगाएर आशिर्वाद लिने मुख्य कार्य बडादशैंमा हुन्छ । दशैं भन्ने बित्तिक्कै जमराको याद पनि आइहाल्छ । विशेषगरी मिठो मिठो परिकार पकाएर दशैंमा खाने गरिन्छ । दशैंमा मासु बढी नैं खाने गरिन्छ । अघिपछिको तुलनामा मांसाहारीको घरमां दशैंंमा मासु बढीं पाक्ने गर्दछ ।
मासु खांँदा धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्ने चिकित्सकको सल्लाह छ । स्वास्थ्यका जानकार कुमार चालिसेले मासु खाँदा ध्यान दिनुपर्ने विभिन्न कुरामा यसरी सुझाएका छन् ।
मासु एक पौष्टिक आहार हो, यसमा १४ देखि २० प्रतिशतसम्म प्रोटिन पाइन्छ । यसमा जिंक, भिटामिन बी, पोटासियमजस्ता तत्वहरू पनि पाइन्छन् । यी तत्वहरू हाम्रो शरीरको लागि एकदमै अति आवश्यक तत्वहरू हुन् । सन्तुलित भोजनमा मासुको प्रयोग अनिवार्य नै मानिन्छ । तर मासुबाट प्राप्त हुने तत्वहरू त्यति सजिलैसँग भने प्राप्त गर्न सकिँदैन, यदि सही र सन्तुलित ढंगले प्रयोग नगरेको खण्डमा।
यदि तपाईं-हामीले राम्रोसँग सुरक्षित ढंगले राख्न नजानेमा त्यही मासुबाट विभिन्न भयानक किसिमका रोगहरु उत्पन्न हुने, सर्ने खतरा रहन्छ । अमेरिका र युरोपका विभिन्न विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता तथा मासु विशेषज्ञहरूको अध्ययन र अनुसन्धानका क्रममा निकालेको निष्कर्ष अनुसार खानामा दैनिक अत्यधिक रातो मासुको प्रयोगले मानिसहरूको संवेदनशील अंग मुटुमा असर पार्नुका साथै उच्च रक्तचाप निम्त्याउने र क्यान्सरको सम्भावना पनि बढाउँछ ।
सोही अनुसन्धान अनुसार दैनिक धेरै मासु खाँदा शरीरमा भएका विभिन्न बलिया हड्डीहरु कमजोर हुने खतरा रहन्छ । आर्थाइटिस (हाडजोर्नीसम्बन्धी रोग) को सम्भावना अत्यधिक हुन्छ । महिलामा स्तन क्यान्सरको खतरा हुनुका साथै महिला-पुरुष दुवैमा कोलेस्टेरोलको मात्रा पनि शरीरमा बढ्न जान्छ । जसका कारण इच्छा लागेको परिकार खानबाट बञ्चित रहनुपर्ने हुन्छ ।
नेपालका मासु पसलहरूमा भएका लापरबाहीको कारण मानिसमा धेरैजसो ब्याक्टेरियाको संक्रमण, जुकाका लार्भाहरू शरीरमा प्रवेश गर्ने तथा मासुमार्फत विभिन्न खालका रोग सर्ने गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन् । फोहर बधशाला, मासुको तयारी र रखबारीमा पर्याप्त ध्यान नदिँदा विभिन्न किसिमका फ्लु तथा सरुवा रोगहरू सर्ने माध्यम बनेको पाइन्छ ।
यी र यस्तै कारणहरुले गर्दा विभिन्न किसिमका चाडहरु मनाउने वित्तिकै मानिसहरूको अस्पताल भनौ हुने संख्या निकै बढेको पाइन्छ । चाडबाडका समयमा धेरै फुड प्वाइजनका बिमारीहरू अस्पताल आउने गरेको वीर अस्पताल, टिचिङ अस्पताल र पाटन अस्पतालको तथ्यांकले देखाउँछ । सही ढंगले मासु र अन्य परिकार नपाउँका, त्यसलाई स्वस्थकर ढंगले नराख्दा खानेकुरामा विषाक्तता बढी खाना प्वाइजनिक हुनपुग्छ र खाएको केही समयभित्रै पेट बटारिने, पेट ढुस्स पर्ने, झाडापखाला चल्ने, अजीर्ण तथा अपच भई तत्कालै पेट फुल्ने लगायतका लक्षणहरू देखिन थाल्छ ।
यस्तो भएमा घरमै उपचार गर्नुका सट्टा तत्कालै नजिकको स्वास्थ्य संस्थाहरुमा गएर जँचाइहाल्नु पर्छ । यस्ता विभिन्न प्रकारका रोगहरुबाट बच्न व्यक्तिगत सरसफाइ, खानेकुरा पकाएका वा काँचो नपाएका खानेकुरा कसरी सुरक्षा गर्ने भन्ने ज्ञानको कमी हो । यसपालिको दसैंमा आफ्नो स्वास्थ्यको ध्यान कसरी राखी आफ्ना पाहुनाको स्वास्थ्यमा समेत कसरी प्रभाव पार्न नदिने हो भन्ने विषयमा केही साधारण कुरामा ध्यान दिन सकिएमा उपचार खर्चका ठूलो जोखिम कम गर्न सकिन्छ ।
दसैंका लागि खसीबोका किन्दादेखि नै हामीले केही आधारभूत कुरामा ध्यान दियौं भने मासुबाट सर्ने रोगबाट बच्न सकिन्छ । हेर्दै नाम्ले परेजस्तो, अति दुब्लो, आँखा आवश्यकताभन्दा बढी रसिलो भएको, झोक्राएर बस्ने, फनफनी घुम्ने खसीबोका किन्नु हुँदैन । यस्ता लक्षणहरु खसीबोका बिमारी भएको बेला देखाउने गर्छन् । अहिले काठमाडौं भित्रने खसीबोकालाई सरकारी स्तरबाटै परीक्षण गरेर रातो र हरियो रङ दलिदिने गरिएको छ । सिङमा हरियो रङ पोतिएका खसी बोका स्वस्थ हुन् भने रातो रङ दलिएका खसीबोका अस्वस्थ छन् । दुई–चार सयको लोभमा अवस्थ्य खसीबोका किनेर ल्याउँदा आफैं बिमारी हुने खतरा बढी रहन्छ । त्यसपछि खसी बोकाको बध गर्नेदेखि लिएर मासु पकाएर खाने, त्यसलाई भण्डारण गर्ने कुराहरूमा पनि केही आधारभूत जानकारी राख्यौं भने मासुजन्य रोगबाट बच्न सकिन्छ ।
– मासुको परिकार तयार पार्ने व्यक्ति (कुक) स्वस्थ नभएमा
– बध गर्ने बित्तिकै पकाएर खाएमा
स्वस्थ्य मासु कसरी छान्ने ?
कुन मासु खाने, कुन नखाने ?
– फ्रिजमा लामो समयसम्म भण्डारण गरेर राखिएको मासु सकेसम्म नखानु राम्रो हुन्छ
– काँचो मासुको परिकार होडबाजी गरेर कुनै पनि हालतमा खानु हुँदैन । किनभने काँचो मासु नै रोगको भण्डार हो । काँचो मासुबाट रोग सर्ने सम्भावना अत्यधिक रहन्छ ।
– पोलेका मासु (सेकुवा, हाकु छोइला आदि) सकेसम्म नखाएकै राम्रो । किनकी मासु पोल्दा राम्रोसँग नपाक्ने र धुँवाबाट विषाक्तता बढ्ने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ
– विभिन्न किसिमको धेरै मसला तथा तेलीय पदार्थको प्रयोग कम गर्ने
– ताजा मासुलाई २ देखि ४ डिग्री सेन्टिग्रेडमा फ्रिजमा ४८ घन्टासम्म भण्डारण गर्न सकिन्छ । राम्रा फ्रिजिङका माध्यमहरू पनि छन्, जुन व्यावसायिक संस्थाहरु मात्र हुन्छन् ।
– मासुलाई फ्रिजमा राख्दा जहिले पनि छोपेर राख्ने गर्नुपर्छ र कहिले पनि माथिल्लो भागमा राख्नु हुँदैन । माथिल्लो भागमा राख्दा मासुमा भएका किटाणुहरु मासुमै हुुने, तरल पदार्थ, हावामार्फत तल्लो सतहमा आउँदा झर्न सक्ने हुँदा तल राखिएका अन्य खाना, पाकिसकेका परिकारहरु, सागसब्जी, साकाहारीका लागि तयार पारिएका÷छुट्याइएका परिकारहरु, फलफूल तथा तरकारीमा पर्नसक्ने खतरा हुन्छ ।
– काँचो मासु र पाकेको मासु एकै स्थानमा नराख्ने ।
दसैंमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू
– मासु खानेबित्तिकै आइसक्रिम, दही, क्रिमका परिकारहरु नखाने
– आफूले मासुसम्बन्धी जानेको जानकारी आफ्ना परिवार तथा आफन्तजनमा पनि बाँड्ने ।